Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Argentine Nicolas Otamendi Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
LB na-egosi Full Story of a Football Defensive Genius kasị mara aha na aha njirimara; 'General'. Nwa anyi bu Nicolas Otamendi Akụkọ ya na akwukwo ihe omuma Eziokwu na-ewetara gi akuko zuru oke nke ihe omuma ama site na nwata rue oge.
Nyocha nke Argentine na Man City Legend gụnyere akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya, mmekọrịta mmekọrịta ya na ọtụtụ OFF-Pitch amachaghị banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike nchekwa ya mana ole na ole na-atụle akwụkwọ akụkọ Nicolas Otamendi bụ nke na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị adieu ọzọ, ka anyị bido.
Nicolas Otamendi Akụkọ nwata - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ
Nicolás Hernán Gonzalo Otamendi mụrụ na 12th nke February 1988, na Buenos Aires, Argentina. Ọ bụ Aquarius site na ịmụ nwa. Amuru ya na ndi nne na nna Argentine Mr na Mrs Hernan Otamendi.
Nicolas tolitere na El Talar, obere obodo dị na Buenos Aires, Argentina. O nwere otutu onyinye dika nwata. N'ezie, Otamendi kewara oge ya n'etiti football na ịkụ ọkpọ n'oge ọ bụ nwata.
Na-etolite, o kesara oge ya n'etiti ịkụ ọkpọ na bọọlụ, na-ewuli ike ya na mgbatị ebe a na nwanne nwanne ya tupu ya ekpebie itinye ike ya niile na egwuregwu mara mma nke football.
Nicolas malitere ndụ football ya na club Argentine ya, Velez Sarsfield. Ọ nọrọ afọ 12 jiri agba ha na-eto eto na ndị isi otu.
N'oge ahụ, o doro anya na ọ dị jụụ n'oge ọ bụ nwata. Ọbụna mgbe ọ kwadoro ebe niile na ndị otu egwuregwu, Nicolas ka biri n'ụlọ ya na nna ya na mama ya.
Nicolas Otamendi Biography - Bilie na-ewu ewu:
Mgbe ọ rụchara ọrụ dị egwu na 2010 World Cup na South Africa, Porto jidere ya na August nke afọ ahụ. Mgbe oge abụọ gara nke ọma, na-emeri trophies Europa na Portuguese, Valencia kwụrụ € 12m maka Otamendi.
Klọb Spanish gbagburu mmasị na Chelsea, Barcelona na AC Milan. Man City hụrụ ohere mgbe Otamendi jụrụ ịzụ ma ọ bụ igwu egwu na Valencia. Ha tinyere aka na ya wee banye General maka nde 28.5. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Banyere Nwunye Nicolas Otamendi:
N'azụ akụkọ gbasara Man City, e nwere Nwanyị mara mma. Nicolas Otamendi lụrụ di na nwunye ya bụ nwa nwanyị Argentine. A hụrụ ya na nwunye ya mgbe ha na-aga n'ụlọ oriri na ọ restaurantụ inụ na etiti obodo.
Ọ naghị ele obi ụtọ na foto dị n'okpuru. Eleghị anya ọ bụ n'ihi Pep Guardiola hapụrụ ya na egwuregwu dị mkpa.
Di na nwunye a nwere nwa nwoke mara mma nke yiri nna ya.
Nicolas Otamendi makwaara na ya nwere ụmụaka ndị ọzọ na-edebe nkọwa ha onwe ha.
Nicolas Otamendi Biography - Militarydị ndị agha:
Otu n'ime nicknames aha Otamendi bụ General, na-asọpụrụ n'ememme mgbaru ọsọ ya nke ọ na-ekele ndị fan.
A na-akpọkwa ya El Mohicano. Nickname a metụtara afụ ọnụ ya.
Nicolas Otamendi Beard:
Nicolas bụ ugbu a na elu na agha anyị nke ajị agba. Onye Argentine ahụ kwetara na afụ ọnụ ya na-enyere aka na-eme ihe ike, nke siri ike-mmadụ.
Ọ bụ ezie na ọ naghị emehie, o doro anya na ọtụtụ oge na mbọ na-aga n'ịdozi na ịkpụzi ntutu ihu ya, yana yana edozi isi nke oge a, agaghị ahapụ ya ka ọ ghara ile anya.
Nicolas Otamendi- Eze nke ajị agba.
N'okwu ya ..'Amalitere m ịhapụ afụ ọnụ m na Valencia ma ọ masịrị m, yabụ kemgbe ahụ, ọ bụrụla akụkụ buru ibu nke ụdị onye m bụ. ”
N'ezie, Otamendi afụ ọnụ ya nke na-akọwa ọdịdị ya dị egwu edugawo na-aga nke ọma n'ọtụtụ ọrụ ya. A na-ahụ ihe atụ nke ịga nke ọma na-aga nke ọma n'okpuru.
Mgbe afụ ọnụ ya chere ihu merie ya ka ọ dị n’elu. A na-ahụ otu ihe atụ nke egwuregwu na-emeri n'ọsọ egwuregwu.
Nicolas Otamendi igbu:
Otamendi nwere egbugbu mbụ ya mgbe ọ dị afọ 14. Taa, o nwere ọtụtụ, nke ọ bụla nwere mkpa ọ dị.
N'okwu ya “Nwanne m na mụmụ m, nna m, mama m, n'ikpeazụ, ihu nna m na-eche ihu n'ime ahụ m. Iji drie, Ọ bụrụ na m seea design nke na-ejide anya m, aga m aga maka ya.
Nicolas Otamendi Eziokwu Akụkọ - Ihe Na-akpata Argentine:
Mgbakwunye Otamendi na ndi agha Manchester City mere ka enwere Argentina ka oburu mba kachasi anya na ndi agha obodo.
Onye na-azụ azụ ghọrọ onye nke isii Argentine na-anọchi ya na ụlọ mgbakwasa Etihad. O kpughere na onye agbata obi ya bụ Sergio Aguero bụ otu n'ime isi ihe mere mkpebi ya iji gbanwee Valencia maka Manchester.
O kpughere: “Kemgbe oge mụ na Aguero kwurịtara okwu n’oge ụfọdụ n’otu Copa America, mmasị ndị mmadụ na-enwe na City na-abụkarị ihe na-adọrọ mmasị.”
Nicolas Otamendi daybọchị ọmụmụ ụbọchị ọmụmụ:
Otamendi keere ụbọchị ncheta ọmụmụ ya na ụfọdụ ndị ama ama sitere na mgbe ochie, gụnyere Charles Darwin na Abraham Lincoln. Na nso nso a, ndị na-eme ihe nkiri Jesse Spencer na Josh Brolin na-afụkwa kandụl ha n'otu ụbọchị dị ka Nicolas.
Nicolas Otamendi Biography Eziokwu - Onye na-apụnara mmadụ ihe ndekọ:
Otamendi enweghị obi abụọ, onye na-emebi ndekọ. N'otu oge, Real Madrid na-ekpori ndụ na ndekọ ha, nke guzo na mmeri 22 n'otu oge, ruo mgbe ndị dike La Liga bịara megide General, Nicolas Otamendi.
Ọ bụ Cristiano Ronaldo onye meghere isi, mana Valencia kwusiri ike ịha nhata, n'oge na-adịghịkwa anya mgbe ọkara gachara, 6ft General gbagoro elu iji bulie isi ihe mgbaru ọsọ ya.
Nke a wetara njedebe mmeri Real Madrid nke meriri ọnwa anọ.
Nicolas Otamendi Ndụ Ezinụlọ:
Nicolas Otamendi sitere na nzụlite ezinụlọ nke nna ya na-arụ ọrụ. Ọnọdụ ezinụlọ ha dị elu dị ka ụlọ ahịa football kwụrụ ụgwọ.
Ndị nne na nna ya abụọ Mr na Mrs Hernan Otamendi bi na isi obodo Argentina, Buenos Aires. A kọọrọ Nicolas Otamendi ka ọ nọrọ nne ya nso.
Ihe arụsị nke Nicolas Otamandi abụghị onye ọzọ karịa Roberto Ayala.
Mgbe Otamendi mere Ogwe Mmiri World nke Argentina na 2010, ọ malitere ịmalite iji aka ya na ndị na-emekọrịta ihe ọnụ Roberto Ayala, Onye mere ihe karịrị otu narị afọ nke ọhụụ maka La Albiceleste.
The kpara agbachitere (Ayala) nọrọ afọ asaa na Valencia n'etiti 2000 na 2007. Ọ bụ ya nyeere aka mee ka onye na-eso ụzọ ya na-eto eto (Nicolas Otamendi) sonye na klọb na 2014.
General na-enwe mmasị iji akpụkpọ ụkwụ mkpịsị aka mee ka ọdịdị ya na mgbake kwalite site na nrụgide na mmerụ ahụ.
A na-ahakwa akpụkpọ ụkwụ ndị a iji nyere ndị na-eme egwuregwu aka maka mgbatị na-arụ ọrụ post na ime ka mmụba ọbara ha.
Nicolas Otamendi bụ Aquarius site na ịmụ nwa. O nwere àgwà na-esote ya na àgwà ya.
Ike nke Nicolas Otamendi: Ọ na-aga n'ihu, nke mbụ, nke onwe ya na nke ụmụ mmadụ.
Nsogbu Nicolas Otamendi: Na-agba ọsọ site n'ikwu okwu mmetụta uche, mmetụta dị egwu, enweghị nkwenye ma na-adịghị mma.
Ihe Nicolas Otamendi nwere mmasị: Na-enwe obi ụtọ na ndị enyi, na-enyere ndị ọzọ aka, ịlụ ọgụ maka ihe kpatara ya, mkparịta ụka ọgụgụ isi, onye na-ege ntị
Ihe Nicolas Otamendi achọghị: Nkwụsịtụ, nkwa ndị agbagha, ịbụ ndị owu na-ama, ndị na-adịghị mma ma ọ bụ ndị na-agwụ ike, ndị na-ekweghị na ha
Daalụ maka ịgụ akwụkwọ Nicolas Otamendi nke Childhoodmụaka yana akụkọ eziokwu ndị ọzọ. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!